HVM : Hijer y kokoa ny sosialim-bahoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaHVM : Hijer y kokoa ny sosialim-bahoaka
Tontosa soa aman-tsara ny Fihaonambem-paritry ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara na ny HVM tao Toliara, ny 16 sy 17 jona teo. Araka izany, maro ireo zavatra nivoitra nandritra io roa andron’ny fikaonan-doha io.
Anisan’ny goavana tamin’izany ny fanambarana ny fahavononan’ny antoko HVM amin’ny fifidianana Filoham-pirenena 2018. Tsy io ihany anefa fa amin’ireo fifidianana rehetra isan’ambaratongany. Voalaza ihany koa fa hampandany ny kandidàn’ny HVM amin’ireo fifidianana rehetra manomboka any amin’ny Filoham-pirenena hatramin’ny Ben’ny tanàna izy ireo. Izay no tena hifotoran’ny antoko amin’izao fotoana izao, raha ny voalaza hatrany. Na izany aza anefa, tsy ho mora ny fanatanterahana izany, raha ny nambaran’ny filoha nasionalin’ny HVM, Rivo Rakotovao, fa mila ny ezaky ny mpikambana tsirairay eo anivon’ny antoko. « Hifanentana hatrany isika amin’ny fandraisana andraikitra ary hitondra fahavitrihana hatrany mankany amin’ny tena fampandrosoana ny firenena », hoy ny filoha nasionalin’ny HVM.
Ankoatra izay, nanambara ihany koa ny teo anivon’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara fa resy lahatra tanteraka izy ireo amin’ny zava-bitan’ny Fitondram-panjakana sy ny ezaky ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ny fampandrosoana ny firenena. « Maro ny zava-bitan’ny Fitondram-panjakana, toy ireo fotodrafitrasa maro isan-karazany eo amin’ny sehatra maro. Mbola ho maro ihany koa anefa ireo eo andalam-pamolavolana. Teo ihany koa ny ezaka vitan’ny Fanjakana eo amin’ny lafiny sosialim-bahoaka, toy ny fahasalamam-bahoaka, ny fampianarana, ny fanomezana rano fisotro madio amin’ny faritra maro, ny fanomezana herinaratra, sns. Ary ny tena goavana ny teo amin’ny lafiny tsy fandriampahalemana, izay tsapa fa nihena ny tahan’izany. Izany rehetra izany no mahatonga anay ho resy lahatra tanteraka fa miasa ny Fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina », hoy ny fanambarana.
Nanambara ihany koa izy ireo fa manohana ny Fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao ary vonona ny hifanome tanana hatrany ho amin’ny fampandrosoana ny firenena.
Etsy andaniny, raha ny mikasika ny tatitra nataon’ireo kaomity mpikarakara ny Fihaonambem-paritry ny HVM tao Toliara mahakasika ilay fikaonan-dohan’ny vaomiera indray, nambara fa hifototra misimisy kokoa eo amin’ny lafiny sosialim-bahoaka ny antoko HVM manomboka izao. Izany hoe, hanatanteraka asa sosialy goavana amina faritra maro izy ireo. Manakaiky kokoa ny vahoaka ahafahana mahafantatra tsara ny hetahetam-pon’izy ireo no dingana tsy maintsy ataon’ny HVM, raha ny fanambarana hatrany.
Izay indrindra no nahatonga ny fanambin’ny antoko HVM amin’ny fanompoana vahoaka izay mitarika mankany amin’ny fampandrosoana isam-paritra. « Fampandrosoana ny firenena no atao, noho izany, hifanome tanana amin’ny Fitondrana hatrany ny antoko HVM mba ho tombontsoan’ny vahoaka sy ny firenena fa tsy ho tombontsoan’olom-bitsy », hoy hatrany izy ireo.
Fa eo ihany koa ny soson-kevitra avy amin’ny antoko HVM hatolotra ny Filoham-pirenena mahakasika ny Fanjakana tsara tantana mba hampitoviana an’i Madagasikara iray manontolo.
Noho izany, hoy hatrany izy ireo, ny hanao sy hanome ny tsaratsara kokoa ny vahoaka sy ny firenena no tanjona.
Ankoatra izay, tontosa ny sabotsy 17 jona teo ihany koa ny fanovana sy ny fanatsarana ny Birao nasionalin’ny antoko HVM. Araka izany, lasa misy filoha lefitra roa eo anivon’ny Birao nasionaly ary nampidirana tompon’andraikitra vehivavy izany. Tsy iza izany fa Monique Rasoazananiera sy Horace Gatien. Tsy vitan’izay fa napetraka ihany koa ny mpandrindra ankapobeny rezionaly miisa 22. Izany hoe, manana mpandrindra rezionaly izany ny antoko HVM manerana ireo Faritra 22.
Anton’izay, raha ny fanazavan’ny filoha nasionaly, Rivo Rakotovao, ny hanatsarana hatrany ny fitantanana ny antoko. « Mino aho fa hitondra ny fomba fijeriny amin’ny fampandrosoana ireo mpikambana vaovao eo anivon’ny Birao nasionaly ireo », hoy izy.
Nofaranana tamin’ny fety fankalazana ny fahatelo taona nijoroan’ny antoko HVM kosa ny Fihaonambem-paritra tao Toliara. Marihina fa ny 29 mey 2014 no niforonana sy nijoroan’ny antoko HVM. Araka izany, amin’izao fotoana izao, voalaza fa ny HVM no maro an’isa indrindra izay mahenika an’i Madagasikara.
Nanohana ny Mapar ?
Tsy nampoizina. Tonga nanome voninahitra sy nanotrona iny Fihaonambem-paritra tao Toliara iny ny avy amin’ny antoko Mapar II sy ny Mapar III. Tsy mbola fantatra mazava kosa na hanara-dia sy hanatevin-daharana ny HVM izy ireo. Na izany aza anefa, tonga mavitrika ary anisany nanotrona ny Fihaonambem-paritra izy ireo. Tamin’izany indrindra no nanambaran’ny filoha nasionalin’ny HVM, Rivo Rakotovao, fa misokatra ho an’ny rehetra ny antoko HVM. « Tsy manavaka ary mandray izay te-hifanohana aminy ny eo anivon’ny HVM. Tanjona iray ihany no katsahina mandrakariva dia ny hampandroso an’i Madagasikara« , hoy hatrany ny filoha nasionaly.
Ankoatra izay, raha ny fizotry ny hetsika indray, tao amin’ny kianja mitafo Toliara no nanatanterahana iny Fihaonambem-paritra fahatelo ho an’ny antoko HVM iny. Feno hipoka hatrany an-tokotany ny kianja mitafo, nifanitsa-kitro ary nangorom-potsy mihitsy ny toerana nandraisana ny hetsika. Noho izany indrindra no nilazan’izy ireo fa iny Fihaonambem-paritra tao Toliara iny no tsara sy be olona indrindra raha mihoatra tamin’ireo Fihaonambem-paritra roa voalohany, tao Fianarantsoa sy Toamasina.